Avions samihafa - Rikoooo
To access the X-Plane 10 version of this add-on click hereComplete package (model + 2d panel + VC + sounds) Tupolev Tu-204-300 amin'ny loko an'I Vladivostok Air. Fiaramanidina tsara kalitao miaraka amin'ny modelim-pilaminana. Omeo azy io ny andrana. Tupolev Tu-204 dia jiosy sivily mampiavaka azy. Hamaky bebe kokoa
Anaran'ny fisie tupolev_tu-204_x-plane_9.zip
Remos GX avy amin'i vFlyteAir v5.1 X-Plane 9 Download
Version for XP9. Ho an'ny version mifanaraka amin'ny X-Plane 10 tsindrio eto. Io fanampiana Remos GX io dia tonga faharoa amin'ny fifaninanana nokarakarain'ny January 2013 by x-plane.org. Ankoatra ny kalitao tsara indrindra izay nanosehana ny simulation ho tena realisme (jereo ny horonan-tsary). Ny POH dia tafiditra ao amin'ny downlo ... Hamaky bebe kokoa
Anaran'ny fisie remos_gx_by_vflyteair_v5.1_x-plane_9.zip